नेपाल चेम्बर अफकमर्सका अध्यक्ष श्री राजेश काजीश्रेष्ठ र तान्जानियाका राजदूत बाराका एचलुभान्डा बीच भेटघाट । | .:: Nepal Chamber of Commerce (NCC) नेपाल चेम्बर अफकमर्सका अध्यक्ष श्री राजेश काजीश्रेष्ठ र तान्जानियाका राजदूत बाराका एचलुभान्डा बीच भेटघाट । – .:: Nepal Chamber of Commerce (NCC)
नेपाल र तान्जानियाबीच सन् १९७५ को जनवरीमा कूटनीतिक सम्बन्धकायमभएको हो। त्यसयता नै बहुपक्षीयफोरमहरूमानेपाल र तान्जानियालेएकअर्कालाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ । नेपालजस्तै तान्जानियापनि असंलग्नआन्दोलनको सदस्य राष्ट्रमा पर्छ । नेपाल र तान्जानिया संयुक्त राष्ट्रसंघको सशक्त सदस्यहो ।
यस भेटघाटमा नेपाल चेम्बर अफकमर्सका अध्यक्षश्री राजेश काजीश्रेष्ठले नेपाल र तान्जानियाभोगोलिक
रुपले टाढा भएपनिव्यापारको माध्मबाट निकट राख्न सकिनेबताउनु भयो । उहाँले विभिन्नव्यापार मेलामा
द्विपक्षीयकोसहभागिताव्यापार प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण र हवाई सम्पर्कले दुई मुलुकबीचको आर्थिक
सम्बन्धलाई सुदृत बनाउने जानकारी दिनु भयो ।
नेपाल र तान्जानियादुवै कृषिजन्यपर्यटकीय मुलुकभएकोले तान्जानियाका राजदूतले तान्जानियाको आर्थिक संभाव्यताबारे बताउनु भयो । उहाँले तान्जानिया चेम्बर अफकमर्स एण्ड इण्डष्ट्रीजसँग द्विपक्षीयव्यापार लगानी प्रवद्र्धन गर्न समझदारी पत्रकायमगर्न सुझावदिनु भयो । अहिले तान्जानियाले भारतको मुम्बईबीचप्रत्यक्षहवाई सम्पर्क कायमभएकोले तान्जानिया र नेपालबीचव्यापार गर्न संभव रहेको र तान्जानियावन्यजन्तु आरक्षण स्थल रहेको जानकारी दिनुभयो ।